I-25 EPHOLILEYO YOKUCHEBA IINWELE KUBAFANA (I-2021 YOKUSIKA KUNYE NEZITAYILE) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-25 yeenwele ezinde eziBalaseleyo zabafana
Izinwele ezinde kumakhwenkwe ziye zaba yenye yezona ndlela zithandwayo kwisitayile kwiminyaka yakutshanje. Ukusuka kwizimbo zangoku ukuya kwezisikiweyo zakudala, amakhwenkwe aneenwele ezinde aneenwele ezininzi ukuya…
Izinwele ezinde kumakhwenkwe ziye zaba yenye yezona ndlela zithandwayo kwisitayile kwiminyaka yakutshanje. Ukusuka kwizitayile zangoku ukuya ekusikeni okudala, amakhwenkwe aneenwele ezinde aneenwele ezininzi anokukhetha kuzo. Ngelixa umkhwa omtsha wefashoni kukufumana ukubuna okanye ukusika emacaleni nasemva ngeenwele ezinde ngaphezulu, iinwele zamakhwenkwe ezinobude obongezelelekileyo, ivolumu, kunye nokuhamba kuya kuhlala kuyinto entle. Ezi nwele zinde zivela kwindoda kunye neqhina eliphezulu ukuya kubude obude obude beenwele ezinee-bangs kunye nokutshixa kwendalo okuqhelekileyo. Nokuba uneenwele ezithe nkqo, ezingqindilili, ezirhabaxa, okanye ezinenwele, zininzi iinwele ezipholileyo zamakhwenkwe onokuthi ucele umchebi wakho oza kubonisa isitayile sakho kunye nobuntu. Ukukunceda ufumane ukusikwa okunefashoni kunye nezitayile, siqulunqe uluhlu lweenwele ezinde ezilungileyo zamakhwenkwe zokukopa kulo nyaka. Ukuba ufuna ukutshintsha inkangeleko yakho kwaye uzame ngeendlela ezinde, jonga ezi ndlela zipholileyo zokukhwela iinwele zamakhwenkwe aneenwele ezinde ukuze ufumane isimbo esiya kuthi sibonakale silungile kuwe.
1Izitayile zeenwele zabafana ezinenwele ezinde
1.3Izinwele ezinde eziMdaka
1.4Ubude obuPhezulu beHirstyle
1.5Izinwele ezinde kunye neBangs
1.6Izinwele ezinde eziLusu
1.9Ixesha elide u-Bob Bob kunye neXesha eliPhakathi
1.11Ubude obuPhakathi buSikiwe
1.13Amaza eenwele ezithunyelweyo
1.14Izinwele eziPhakathi ngeNdalo
1.15Umbala weShag kunye neeBangs
1.16Ubude obuphakathi kweenwele ezinzima
1.18Ubude beChin ngee-Bangs ezide
MbiniUngazikhulisa njani iinwele zamakhwenkwe
3Ungazisika njani iinwele ezinde zabafana
4Ungayenza njani indlela yeenwele ezinde zeNkwenkwe
5Ezona Mveliso zeNwele ziNgcono kubafana
Izitayile zeenwele zabafana ezinenwele ezinde
Indoda yebhanki yenye ye iinwele ezipholileyo ezingamakhwenkwe ngeenwele ezinde kwaye unokufezekisa ngokulula ngokuvumela iinwele zakho ukuba zikhule. Ngendoda yendoda, amakhwenkwe angazinxiba iinwele zawo ezinde kwaye zibaleke xa ziziva ngathi okanye azibophe kwaye azigcine ebusweni xa zidlala imidlalo. Ukufumana i-bun man, vele ubophe iinwele ezinde zenkwenkwana kwi-bun ngasemva kwentloko. Abanye abantwana bayakuthanda ukusebenzisa ubude obongezelelekileyo kwaye bayisongele ngeenxa zonke kwibhanti yeenwele zobuhle obongezelelekileyo.
Njengebhan yomntu, iqhina eliphezulu liya kugcina iinwele zomntwana wakho zingabikho emehlweni akhe. Umahluko ophambili kukuba iqhina eliphezulu lihleli phezulu phezulu entloko kwaye linokuba sisitayile esihle kubafana abafuna iinwele zabo, kodwa baneenwele ezimfutshane. Ukufumana iqhina elingaphezulu nelicocekileyo, cela i-undercut okanye i-fade emacaleni entloko, eya kwenza ukuba iqhina eliphezulu livele.
Izinwele ezinde eziMdaka
Intle kwaye inesitayile, iinwele ezinde ezirhangqayo ziyathandeka kwaye zintsha kubafana abakwaziyo ukuzilungisa kakuhle iinwele zabo. Ezi zitayile zilungele abantwana abane-wavy yendalo okanye iinwele ezenziwe ngombala, ezinokuthi zikhokelele kwimfashini kodwa kugcinwe ulondolozo olusezantsi. Ukuvumela iinwele ezijijekileyo okanye ezirhangqileyo ukuba zikhule zide kudala iinwele ezikhululekileyo kodwa ezinesitayile esinokuthi senziwe sibonakale sisemthethweni ngento encinci yesitayile.
Ubude obuPhezulu beHirstyle
Izinwele ezomeleleyo zinokukhohlisa, kodwa ukuzikhulisa ixesha elide kuyenza ibe mpuluswa kwaye igcine i-frizz iphantsi kolawulo. Ezi ndidi zeenwele zingqindilili ezinobude obuphakathi zinokuba ze-retro kodwa zithandeke kumakhwenkwe akhetha ukuba nobude obuthile. Ngokhetho olungenamda lokuloba, cela i-barber yakho ukuba yongeze umaleko kwiinwele eziphakathi zokucheba kunye nokuhamba.
Izinwele ezinde kunye neBangs
Iinwele ezinde zinokudika emva kwethutyana, kodwa ukongeza ii-bangs yindlela elungileyo yokuyitshintshela umntwana wakho. Olu hlobo luza kubonakala luhle ngakumbi kubafana abanobuso obujikelezileyo, njengoko ii-bangs zinceda ukubumba ubuso. Ii-bangs ezisandula ukusikwa zibukhali, kodwa le iinwele ziya kukhululeka ngakumbi xa ii-bangs zikhula ixesha elide kwaye zenze isitayile esimdaka.
Izinwele ezinde eziLusu
Amakhwenkwe aneenwele ezijijekileyo anokuyinxiba le nto yokugcina iliso iphantsi, ukujonga okungaqhelekanga. Iinwele ezinde ziya kubunzima kuyo nayiphi na into enqabileyo, kwaye ngenkangeleko entle, entle, amakhwenkwe anokufaka isicelo sokuqaqamba. Ukubonisa iinwele zendalo zenkwenkwe yakho kuya kumenza abonakale emhle ngaphandle kwesondlo.
I-ponytail yindlela yokwenza iinwele kubafana abade beenwele abafuna isitayile esilula, esisezantsi sokugcina esipholileyo. Elula kune-man-bun, konke okufunekayo ukutyhala iinwele kude nobuso kukunwebeka kweenwele. Kukulungele ukudlala imidlalo okanye ukuya esikolweni, le nwele igcina iinwele zibuyele umva kodwa ijongeka intle ngexesha elinye.
Ngokupholileyo ngaphandle kokuphola kwaye mhle nje, iinwele ezinde zamagxa zezona zisiko zilungele abantwana abaneenwele ezinde ezifuna ivolumu yendalo kunye nentshukumo. Kungekude kakhulu kwaye kungabi kufutshane kakhulu, iinwele eziphakathi ziya kuwela ekwahlukaneni kwendalo ngenkangeleko ecocekileyo kodwa ehambayo. Ubude behlombe bezinwele ezibonisa kwaye zigxininisa ubume bendalo beenwele, zisenza isitayile esihle kubafana abaneenwele ezithe nkqo, ezijija okanye ezigobileyo.
Ixesha elide u-Bob Bob kunye neXesha eliphakathi
Iinwele ezinde ezijijekileyo zinenkalipho, inkcazo ijongeka ngokwawo. Awudingi ukwenza enye into ngeenwele. Kungenxa yoko le nto i-bob egobileyo ende enesahlulo esiphakathi sisimbo esithandwayo samakhwenkwe amaninzi anee-curls. Hlula iinwele ezantsi embindini kwaye ubonise ubume bendalo.
Amakhwenkwe ane curls ezixineneyo ngokwendalo aya kuba nakho ukushukumisa esi sitayile. I-Afros ifuna ulondolozo, njengoko iinwele zingoma ngokulula, kodwa imveliso elungileyo yeenwele inokunceda kuloo nto. I-afro sisinwele esinesibindi esiya kwenza amakhwenkwe aziqhenyce ukubonisa ii-curls zawo.
Ubude obuPhakathi buSikiwe
Amakhwenkwe aneenwele ezithe nkqo ayakuthanda ukujonga ukusikwa okuphakathi okuteketisiweyo. Iingqimba zinika iinwele intshukumo kwaye zenze ukuba iinwele ezigudileyo zibonakale zihamba kwaye zihamba kakuhle. Isitayela asifuni ukugcinwa okuninzi, kuba amakhwenkwe anokuyinxiba ngokungcolileyo kwaye ingadityaniswa ukuze kujongwe ukubengezela.
Zininzi izinto onokukhetha kuzo kwiidreadlocks. Amakhwenkwe angadibanisa le nwele kunye nefade okanye i-undercut ye-edgy look. Nokuba unxibe ii-dreadlocks ngaphandle kwesitayile, uyimbonakalo entle, eyahlukileyo. Ii-Dreadlocks zikwanethuba lokukwazi ukukhula ixesha elide ngelixa ziqulethwe kwisitayile.
Amaza eenwele ezithunyelweyo
Amakhwenkwe akuthiyileyo ukuya kwizinwele aya kuthanda i-hairstyle engcolileyo ephakathi kweenwele ze-wavy. Amagagasi omyalezo anokukhula ngokuthe ngcembe kwesi sitayile sendalo, sinezixhobo ezingafunekiyo. Njengoninzi lweendlela ezinde, amaza amdaka ayindlela efanelekileyo yokuqaqambisa ubume bendalo beenwele.
Izinwele eziPhakathi ngeNdalo
Le iinwele linyathelo lokuqala lokukhulisa iinwele zenkwenkwe ixesha elide. Vumela iinwele zifikelele kubude obuphakathi ukufumana isimbo sendalo kunye nokuthungwa. Okwangoku, oku kuya kuba kukucheba iinwele okumdaka kodwa nefashoni.
Umbala weShag kunye neeBangs
Isinwele esenziwe ngombala se-shag esinee-bangs yimbonakalo ye-retro eya kuthi ivumele iinwele zenkwenkwe yakho ukuba zihambe ngokwendalo yevolumu ephezulu kunye nokuhamba. Ukufumana oku kunqunyulwa, cela iileya kubude obahlukeneyo ngeenxa zonke entloko. Isiphumo kukucheba iinwele ngenkalipho okunika iinwele ezithe tye ubuninzi bokuthambisa ngakumbi.
Ubude obuphakathi kweenwele ezinzima
Ubungakanani obuphakathi kweenwele ezi-wavy zilungile kubafana abangafuni iinwele ezinde ezinde, kodwa bafuna intshukumo ethe kratya kunenwele eqhelekileyo emfutshane. Eyahlukileyo kwaye inesitayile, iinwele eziphakathi ezinamavili aphakathi ziyahluka kwaye zinokubhalwa kakuhle kuzo zonke izihlandlo. Le nwele ethandwayo inokudityaniswa ne-bangs okanye iileya zobume ngakumbi kunye nobunzulu.
Kumakhwenkwe aneenwele ezininzi ezibunjiweyo, ukujija kuyindlela ephathekayo yokuyigcina yonke iphantsi kolawulo kwaye ijonge nefashoni kwiindlela ezahlukeneyo. Iitwists ziyafana nee-dreadlocks kodwa kulula, ixesha elifutshane elinokusetyenziswa kwengxelo eqinileyo.
Ubude beChin ngee-Bangs ezide
Enye yeenwele ezinde ezilula zamakhwenkwe, konke okufuneka ukwenze apha kukuvumela iinwele ezinee-bangs zikhule. Xa ii-bangs zide ngokwaneleyo, ungazidibanisa ziye ecaleni kweli cala, lokucheba iinwele eziphantsi.
Ungazikhulisa njani iinwele zamakhwenkwe
Ukukhulisa iinwele zamakhwenkwe akufuneki kulondolozo lukhulu, njengokuxubha imihla ngemihla kunye ne-shampoo kunye nolawulo lwe-conditioner (zama ukuhlamba iinwele amaxesha ambalwa kuphela ngeveki). Ukuqhekeka koqhawulo kuphele xa kubonakala, njengoko beza kumisa iinwele ekubeni zikhule ngokukhawuleza.
Ungazisika njani iinwele ezinde zabafana
Uninzi lweenwele zamakhwenkwe zifuna ukusikwa kwezinye iziphelo kunye nolunye ugcino, ukusika, okanye ukudibanisa ukuya entloko. Ukusikwa kwesikere yeyona ndlela iphambili esetyenziselwa ukunqunyulwa kweenwele ezinde, kodwa ii-buzzers zinokusetyenziselwa iindlela ezingathandekiyo zangaphantsi kunye nokuphela.
Uya kudinga ikama elungileyo-yamazinyo ukuze uqiniseke ukuba zonke iinwele zihamba kwicala elinye ngaphambi kokucheba. Ukugcina ubude beenwele zihambelana kuhlala kuyinjongo ephambili yokucheba iinwele ezinde. Kwimiqolo, zama ukwenza ukudibanisa kube mpuluswa kwaye kungabinamthungo kangangoko kunokwenzeka.
Ungayenza njani indlela yeenwele ezinde zeNkwenkwe
Iinwele ezinde zinokuba nzima ukwenza isitayile, kodwa iimveliso ezintle zeenwele zinokwenza inkqubo yesitayile ibe lula. Isitshixo ngeenwele zamakhwenkwe kukufumana imveliso enikezela ukubamba ngokufanelekileyo kunye nokuthungwa okuya kuthi kulungelelanise isidingo solawulo, ivolumu kunye nokuzala. Ezona mveliso zintle zamakhwenkwe zibonelela ngokukhanya okuphakathi kokubamba kunye nokugqitywa kwe-matte ngenkangeleko ebunjiweyo. Sicebisa ukufaka izitshizi zetyuwa yolwandle kunye ne-mousses kunye nokukhanya okulula kunye ne-waxes kwisitayile seenwele ezinde kubafana.
Ukwenza iinwele ezinde zamakhwenkwe, soloko usebenzisa inani elincinci lemveliso kwaye ngokuthe ngcembe usebenze ngeenwele. Yisasaze kuyo yonke indawo kwaye uqiniseke ukuba unxibe umphezulu kunye neengcebiso zokunciphisa i-frizz. Abantwana banokushiya iinwele zabo zibaleka ngokwendalo ukuze bajongeke ngokungakhathali, okanye benze iinwele abazifunayo ngebrashi okanye ngeminwe.
Ezona Mveliso zeNwele ziNgcono kubafana
Ezona mveliso zintle zamakhwenkwe zenziwe ngezithako ezisemgangathweni kwaye ziya kunceda abantwana ukuba bazenze iinwele zabo bafezeke. Ngeemveliso ezininzi ezahlukeneyo zokwenza isitayile onokukhetha kuzo, kunokuba kukukhohlisa ukukhetha ukhetho olufanelekileyo kwizinwele zakho. Kubaqalayo, uya kufuna ukuqaphela izinto eziphambili ezifana nokubamba kunye nokuthungwa. Amanye amakhwenkwe akhetha i-gel kunye ne-pomade yokugqibezela okuqaqambileyo, ngelixa abanye bathanda i-wax, udongwe, i-cream, i-mousse, isifafazi setyuwa saselwandle kunye nepraypray.
Amakhwenkwe aneenwele ezinde kufuneka asebenzise ukukhanya kwimveliso yokubamba ephakathi ekulula ukuyifaka ngelixa unikezela ngolawulo kunye nokunciphisa i-frizz. Kuxhomekeka kwisitayile ofuna ukuso ukufezekisa, unokufuna ukugqitywa kwe-matte ngenkangeleko ebunjiweyo okanye isiphelo esimenyezelayo sokuqaqamba okuphezulu. Ukukhuthaza ukukhangela kwakho, nazi ezona mveliso zintle zamakhwenkwe anokuzisebenzisa xa uthambisa iinwele ezinde.
Ijeli yeenwele zaBantwana | UkuKhanya kokuKhanya | Imichiza yasimahla | Yenziwe nge-Organic Aloe Vera kunye neeVithamini | Kukhuselekile ... Izimvo eziyi-1,670 Jonga iAmazon
I-American Crew Ndiyila i-Cream, i-3 oz, ibambe ngokuBambekayo ngokuKhanya okuPhakathi Izimvo eziyi-10,445 $ 18.50 Jonga iAmazon
I-Artnaturals Curl echaza iCream -Iicurls Moisturizer kunye ne-Enhancer w / iAlmond, iJojoba kunye neArgan yeoyile kunye ... 1,363 Izinto ezithethwe ngabantu Jonga iAmazon
Ukutshiza uLwandle ngeTyuwa yoLusu lweNwele-ukuCoca ngeMveliso yeeNwele, ukuCoca kweenwele ngeOrganic Aloe Vera, ulwandle ... Izimvo eziyi-3,257 $ 16.99 Jonga iAmazon
I-Kenra yevolumu yeMousse eyongezelelweyo 17 | Firm Bamba Mousse | Zonke iintlobo zeenwele | 8 oz 4.697 Izinto ezithethwe ngabantu $ 18.00 Jonga iAmazon
ilanga inyanga ukuphuma intsingiselo
indoda eneqhina eliphezulu
forearm tattoos amadoda
iinwele ezifashisayo zamadoda